0 Nhengo uye 4 Vashanyi vari kuona nyaya yacho.
Quote: hamburg26 - Kurume 18, 2020, 03:41:59 PM
InsAllah kwese kupi ichadzokera kune zvakajairika 🙏 pamwe musangano wemukadzi wangu uchave uri pamisi yakafanana newe.
Quote: hamburg26 - Kurume 18, 2020, 03:44:04 PM
Stuttgart inogara mu ludwigsburg
Sezvatatarisira, takapona kubvunzurudzwa kwakadzama .. Mushure mekubvunza mudzimai wangu, mukuru pafoni akatsanangura kuti musangano uyu wakanaka. Zvekare zvakare, ivo vakadaira kubhadharwa. Ivo vakaverenga zvinyorwa zvangu pano vanogona kunge vainetseka kuti nei hofisi yevatorwa yakatibvunza kune vakawanda vanobhadhara. Rega ndikuudze izvi: Mukadzi wangu akaita tsaona yebasa munaDecember uye tsoka yake yakatyoka. Aifanira kuzorora kwemwedzi miviri. Nekuda kwetsaona yebasa, mubairo wakadzikira nekuti wakafukidza iyo muhomwe yeinishuwarenzi. Ehe, apo hofisi yevatorwa yakaona kuderera kwemubairo, ivo vakakumbira mishumo yechipatara uye vanobhadharira mwedzi miviri iyoyo.
Vakada kubhadharazve, vachiti foni yakadairwa nemaitiro.
(Ndinoita senge ndinonzwa zvakataurwa nemumwe munhu kuti unemukana. Zvakaitika kwatiri mukati medanho revavhiza hazvina kuitika kune huku yakabikwa. Mwari ngavaropafadze.)
Pakapera musangano, mukuru ipapo akaudza corona kuti kubudiswa kwe visa yangu nekuda kwehutachiona kunogona kupera kupera kwaMay.
Ndinovimba kuti vhiza yangu ichauya muna Chivabvu.
Ndichitarisira kuona mazuva ane hutano uye anofara. Kwaziwai
Quote: leowoman - Kurume 27, 2020, 02:32:13 AM
Mhoro, insha'Allah, wasvika padanho rekupedzisira, sezvo hofisi yevatorwa iri kushanda izvozvi, haigare kusvika May. Vaida gwaro rekuwedzera here? Mumwe wako anga ari munharaunda ipi?
Mhoro shamwari, ndakaendesa ese magwaro angu kumumiriri kubva kuIstanbul musi waNdira 20, uye ndaigara ndichitarisira kuti ini ndoziva zvinogona kuitika munyika, vhiza yangu inobuda mumavhiki 2-3. ... iwe unoziva kuti nekuda kwehutachiona, hapana chakajeka ikozvino, mudzimai wangu mugari weGerman uye anogara muKarlsruhe mudunhu re Baden-württemberg. Ini ndinofungidzira nekuda kwekuti hutachiona hwakavharwa mu landratsamt, ini handizive kuti mamiriro akaita sei mune edu ma Consulates. Ini ndinofunga kuti pasipoti yangu haisati yasvika kuGerman, maitiro acho anononoka, handisi kufara Ndinoshuvira moyo murefu kubva kune vese vakamirira
Ndiri Zeynep. Ndiri kunyora kubva kuSakarya, ndangobatana newe. Takatyora muchato wedu wepamutemo musi wa12.12.2019 nemukadzi wangu, ndakapinda mune bvunzo dzeGoethe Institute musi wa7 Kukadzi, uye mhedzisiro yacho yakauya musi wa 10 Kukadzi. Mushure mekunge ndawana chitupa, ndakaedza kuita musangano wekuvhima vhiza pakarepo, ndakakwanisa kuita musangano muna Kubvumbi 7 zvichikonzerwa nekuedza kwakawanda, mushure menguva yakareba, imwe shamwari yakadzima musangano munaKubvumbi, mushure mekunge imwe shamwari yakandiyambira kuti kwakagadzwa mwedzi waMbudzi. Ndakaita musangano wangu wa4 Kurume. Ndakagadzirira matsamba angu e-visa uye ndakaenda kuGerman Consate kuIstanbul kunopa magwaro angu. Musi waApril 7, vakadana mudzimai wangu kubva kuhofisi yevatorwa ndokukumbira kubhadhara kwemwedzi mitatu, ndokuvatumira kwavari netsamba. Uye zvakare, musangano uyu waive wakanaka chose uye wekutanga parunhare; Pane shanduko here muruzivo rwawakapihwa nemumwe wako? Akabvunzwa, uye haana kupindura mukati memukadzi wangu pasina kufunga. Sezvo vaive vagari vemukadzi wangu, vakati maitiro aya haaizoperera uye kuti vhiza yedu ichasvika munguva pfupi. Nekuda kwedenda riripo parizvino, isu takafunga kuti vhiza ichasvika nguva yadarika, asi vhiza yedu haizokanganisike munzira chero yatinonzwisisa kubva kumusangano uyu. Zvimwe kunyange iyo vhiki mune yedu yasvika Musi waApril 17 kubvumidzwa kwekutiza muTurkey kalkiyor, kunyangwe kana kusimudza kweGerman, mhuri inoshongedza kune dzimwe ndege dzinobuda dzisina ndege dzebirlesimi asi munzira dzese. Dzimwe nguva ini ndinozviona zvichiitika kumaguta seCologne / Düsseldorf. Ndinovimba munhu wese vhiza inosvika pakutanga. Mukadzi wangu anogara mupurovhinzi yeSchleswig-Holstein kuchamhembe kweGerman, anogara mudunhu reBad Schwartau reLübeck. Dhipatimendi reEutin Vatorwa riri kutarisa mudunhu mairi, nekuti inzvimbo diki, ndinofunga kuti zvinhu zviri kufamba zvishoma.
Ndinoshuvira munhu wese rombo rakanaka. Kana paine kugadzirisa, ndinozvinyora pano )
Visa Chikumbiro Zuva: 04.03.2020
Kushevedza kweVatorwa: 07.04.2020
Kuendesa Zvinyorwa neM mail: 07.04.2020
Visa Kupinda Zuva:? (Ndichaudza izvi munguva pfupi)
Mukutsvaira kwekuita, iwe wakagovana meseji yakadzama uye ine tariro kunyangwe munhu wese akataura zvisirizvo. Iwe wakagadzira kutumirwa kwemapepa rimwe zuva pamberi pangu, asi nzira yekubvumidza yeVisa inosiyana zvichienderana nenyika, asi iko kuvimbisa kwakandifambira. Ndinovimba uchasangana nemumwe wako nekukurumidza sezvazvinogona.
Ndatenda zvikuru ☺️, ndinovimba muchasangana newawakaroorana naye nekukurumidza sezvazvinogona.
Panguva ino, shamwari yangu, iyo yakanyorera zuva rimwe chete neni, yakaonana nemukadzi weshamwari yangu 1 vhiki rapfuura ndokukumbira magwaro. Kazhinji, ini ndinofunga kuti zvinokwanisika kusvika vevakaroora kubva kune vekunze hofisi kana iri mavhiki 5-6. Iye zvino tave kungomirira vhiza yedu kuti isvike. Zvichazopera. Hofisi yevatorwa yaive zvakare yakanaka kwazvo, usasvibise moyo wako, avo vakanyorera pamberi paKurume 17 havazokanganisika chero nehuwori. Hofisi dzevatorwa dzakapfigirwa kusvika Kubvumbi 19, asi ivo vaishanda muHomeoffice, kana kuti vari kushanda mumahofisi avo akavharirwa ruzhinji. Iko hakuna chinhu chakadai sekumisa kana kumira muchirongwa. Muchokwadi, sezvo zvishandiso zvakamira, ini handina kana hukama zvakanyanya izvozvi, ndinovimba kuti zvichaguma nekukurumidza. InsAllah, avo vasingakwanise kunyorera vanoshanda zvakare nekukurumidza sezvinobvira kav🏽💜